Fitaterana –zotra nasionaly: miakatra daholo ny saran-dalana | NewsMada
Fitaterana –zotra nasionaly: miakatra daholo ny saran-dalana
Miakatra tampoka ny saran-dalana avy eto Antananarivo mankany any amin’ny faritra. Antananarivo –Mahajanga, ohatra, 50 000 Ar raha 30 000 Ar izany mahazatra. Ny antony, hoy ireo mpitatitra, tsy misy mpandeha miakatra mihitsy avy any amin’ny faritra noho ny fahatahorana Coronavirus, ka fatiantoka be ho azy ireo izany. Valin’izay, tsy maintsy fenoina ny banga, raha ny voalazan’ireo mpitatitra ireo ihany. Amin’ny ankapobeny, niakatra 10 000 Ar ny saran-dalana, misy mihoatra lavitra no ho izany.
Be ny olona mandositra ny Renivohitra sy manodidina, indrindra fa nakatona avokoa ireo toeram-pianarana ambony ka tsy vitsy amin’ireo tanora mpianatra no mamonjy ny ray am-dreniny. “Tsy manan-tsafidy izahay sady betsaka ihany koa ireo mpandeha, voatery manao famandrihan-toerana mihitsy ka izay no araraotin’ireo mpitatitra”, hoy ny tanora mpianatra iray ho any Mahajanga. “Izay tsy mahazaka mijanona …”, hoy kosa ny valin-tenin’ireo mpitatitra amin’izay mangata-panazavana.
Minisitera sy ATT
Manoloana izany, omaly, nidina ifotony teny amin’ireo toby fitaterana Fasan’ny karana sy Maki eny Andohatapenaka ny minisitry Fitaterana, Randriamandranto Joel sy ny tale jeneralin’ny ATT (Agence de transport terrestre), Jly Reribake Jeannot. Nijery ireo mpitatitra mampiakatra saran-dalana sy tsy manara-dalàna izy ireo. Efa nisy mpitatitra namaly izany, fa tsy hiasa hamono antoka mihitsy izy ireo. Raha mandeha tsy misy olona hiakatra aty Antananarivo, nefa terena tsy hiova ny saran-dalana midina.
Nanamafy ny tale jeneralin’ny Att fa tsy maintsy taterina ny olona ary tsy azo atao mihitsy ny mampitombo ny isan’ny mpandeha anaty fiara. Tsy afaka miainga ny fiara raha tsy mahafeno ny mombamomba ireo mpandeha. Tsy maintsy tandrovana ihany koa ny fahadiovan’ny fiara sy ny tobim-piantsonana, tsara raha mampiasa tampim-bava ny rehetra anaty fiara satria tsy ho voahaja mihitsy ilay elanelana iray metatra.